Ohatrinona ny bisikileta mitovy amin'ny mihazakazaka? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Bisikileta vs fihazakazahana - ahoana no fomba hitantanana
Ohatrinona ny bisikileta mitovy amin'ny mihazakazaka?
Ny fitsipika ankapobeny amin'ny ankihibe dia misy 1: 3mihazakazaka-to-bisikiletaratio, midika hoe iray kilaometatra nymihazakazakaamin'ny ezaka antononymitovytelo kilaometatra nybisikiletaamin'io haavon'ny ezaka io ihany.Bisikileta12 kilometatra nomitovynymihazakazakaefatra kilaometatra, miaraka amin'ny haavon'ny ezaka roa tonta dia mitovy amin'ny lafiny ankapobeny amin'ny fitaizam-batana.25 Aogositra 2014
Raha te hihena ianao, ny sisa ataonao dia ny mandoro kaloria bebe kokoa ary mandany azy tsy tapaka, ary azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanovana ny sakafonao sy ny fanaovana fanatanjahan-tena bebe kokoa, ary raha manana fanatanjahan-tena ianao dia ny fanontaniana dia hoe iza no fanatanjahan-tena tsara indrindra Ny fandoroana ireo kaloria tafahoatra ireo dia efa nampitahainay ny fahasamihafana misy eo amin'ny filomanosana sy ny fihazakazahana amin'ny fanandramana sarotra ary izao dia te-hijery ny maha samy hafa ny bisikileta sy ny fihazakazahana izahay mba hahafahantsika manangana zavatra kely toa ny fandehanana any amin'ny laboratoara fizika eto. ao amin'ny fandroana ekipa ary hampiditra siansa isika anio. Nifidy bisikileta sy nihazakazaka izahay satria samy hetsika atao an-tanety avokoa mba hahafahanay mahazo siantifika bebe kokoa amin'ny kajikajiantsika, nefa koa satria samy ampiasaina betsaka hanampy anao hanary lanja, eny ary talohan'izay Rehefa mampitaha ny tenanay amin'ny isa kaloria izahay dia nieritreritra fa mendrika ny fandrosoana ary hevero ho fatiantoka amin'ny fanatanjahantena tsirairay.
Ny fihazakazahana dia mavesatra noho izany, manampy amin'ny osteoporose amin'ny alàlan'ny fanamafisana ireo taolana sy tonon-taolana etsy ankilany izay tsy dia manome lanja firy ny tonon-taolana ary noho izany dia miteraka risika firy amin'ny ratra. Ny hazakazaka dia mitaky fitaovana kely ary azo atao saika hatraiza hatraiza, fa ny bisikileta kosa mila bisikileta sy kit kely kely na dia manana bisikileta mihodina anaty trano ihany aza ny ankamaroan'ny gym, ary misy safidy hafa koa, ny fanatanjahan-tena dia mety ho ara-tsosialy, na dia mety ho somary be kokoa aza ny bisikileta. azo atao amin'ny haavo somary ambany, azonao atao izao mazava ho azy avy amin'ny teboka farany Mitaingina bisikileta lava kokoa satria tsy dia miady saina. Nanapa-kevitra ny hampiasa kaloria ho refin'ny vatanay izahay satria ny ankamaroan'ny olona mahalala an'ity singa ity ary fomba mora handrefesana ny angovo tena misy marina izany.
Hiresaka kilocalories ianao, izay amboarina amina kaloria an'arivony, satria io no isa azonao amin'ny marika famantarana sakafo, fa koa amin'ny mpanaraka ny fanatanjahan-tena, eny, mora tokoa izao ny mampihena ny lanjanao, mila miara-mandoro bebe kokoa ianao kaloria mandritra ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena sy ny fanaonao isan'andro, avy eo mandany amin'ny alàlan'ny sakafo sy zava-pisotro mandritra ny andro. Raha izany no jerena, dia andao jerena ny fomba handrefesantsika ny fandaniantsika kaloria. Ankehitriny misy safidy maromaro, fa ny sasany kosa dia marina kokoa noho ny sasany. Ankehitriny ianao dia afaka mampiasa calculatera kaloria tsotra ary amin'ity tranga ity dia ataovy ao amin'ny taonanao ny lanjanao ary avy eo Tombano ny hamafin'ny fiarahanao niasa, fa hahazo isa marobe ianao amin'izany satria ny kajy kaloria dia mila mamantatra azy io hoe hatraiza ny tanjanao, omeo famantarana ny kaloria entinao mandoro.
Hiala sasatra aminy izahay, mety ho mpanara-maso na fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena izay afaka mandrefy ny tahan'ny fitempon'ny fonao mandritra ny hetsika rehetra mba hahafantarany ny hamafin'ny fampihetseham-batana nataonao ary avy eo dia atambatra amin'ny angona manokana efa voatahiry ao hanome ianao dia afaka manome tombana tena izy momba ny kaloria anao Nandoro tena izahay nanao an'io asa io, ka anio dia handeha lavitra kokoa izahay handrefesana ny vokatra avy amin'ny culinary misy teknika fandrefesana marina indrindra, ka handeha ho any amin'ny laboratoara izahay jereo tsara ny dikan'izany. Tsy mihaino intsony aho, misaotra tamin'ny fampiasanao ny laboratoarao sy ny fotoanao anio dia te hijery kaloria may sy mifaninana amin'ny bisikileta izahay ary tiako ho fantatra hoe ahoana no ahafahantsika manao izany sy ny fomba handrefesana azy io eto. Handrefy ny fanjifana oksizenina izay matetika antsoina hoe vo2 sy ny olona eto ny vo2 max, saingy ity dia ho submaximal. Io koa ny habetsan'ny ôksizenina ampiasainao amin'ny hery fampihetseham-batana iray, ary miorina amin'izany, miaraka amina fiheverana vitsivitsy dia azonao atao ny mampiofana fandaniana kaloria ary mazava ho azy fa miovaova arakaraka ny fikasana iasanao miasa ary manana fotoana be dia be isika anio ka raha izahay dia mila misafidy karazana ambaratonga roa hahitana hoe iza no mpitaiza tsara indrindra, mieritreritra izay tianao hatao aho anio satria mazava ho azy fa te hijery ambaratonga izay azon'ny olona tazonina ianao mba hahafahanay manamboatra anay 2, fanazaran-tena tsara aerobika ary avy eo angamba ny haavo 4, ary ny fampihetseham-batana miorina amin'ny tokonam-baravarana izay mety ho faritra izay tazomin'ny olona mandritra ny fotoana manokana ananany ary ataonao izany, rehefa manao fandrefesana vo2 ianao dia hahita fahasamihafana lehibe amin'ny fihinanana Oksizena avy amin'ny tetezamita manomboka amin'ny fihazakazahana mankany amin'ny fihodinana okay , koa ho an'ny teny rehetra, mila fanovana hafainganam-pandeha aho, faly aho mahita ny valiny azoko sy Heather tamin'ny fandrefesana ny kaloria nodorana rehefa nihazakazaka sy nandeha bisikileta. Nisarika ny fohy indrindra iathery ary hiasa mafy Manakaiky kokoa ny tokonam-baravarany ao amin'ny faritra 4, fa handeha amin'ny herin'ny aerobika ao amin'ny faritra misy ahy aho mba hampitombo ny herin'ny ankamaroan'ny olona mieritreritra fa ny fihazakazahana dia mandoro kaloria bebe kokoa noho ny bisikileta ka hahaliana antsika ny hahita raha marina izany. ary raha ny fahasamihafana misy eo amin'ny bisikileta sy ny fihazakazahana dia vita, tonga ny fotoana anaovan'i Jonathan manao kajy sy fikajiana ny cardio pooh ho an'ny ezaka ataontsika tsirairay avy nody ihany ny ainay Jonathan tiako hojereko ireo isa voalohany Voalohany indrindra, ahoana no ny kaloria entiko avy amin'ny bisikileta mifanohitra amin'ny fihazakazahana? Raha mijery azy mandritra ny adiny iray isika rehefa mihazakazaka mandritra ny adiny iray dia manodidina ny 900 91 kaloria isan'ora ary avy eo tsy maninona ny Viking 868, ka izany dia fahasamihafana eo amin'ny 124 eo ho eo ary avy eo ny isan'ny andianteny dia somary avo kokoa noho izany ny antony. dia miharihary fa somary lehibe kokoa izy io ka mandany zandriny bebe kokoa ka raha ny fanjifana angovo tena izy dia antenainao ho avo kokoa, noho izany dia 1156 ny fihazakazahana ary 994 amin'ny bisikileta, ka ny fahasamihafana ao amin'ny 212 dia mivoaka kely kokoa.
Heveriko fa azo antoka ny milaza fa samy nieritreritra isika fa ny fihazakazahana dia ho lohalaharana amin'ny fanandramana kelinay eto, izay nataony, raha jerena ny singa filokana varotra amin'ny fanatanjahantena ary ny hoe akaiky kokoa ny bisikileta fampihetseham-batana iray manontolo dia fa manana an'io tombony io izy, fa ny bisikileta azo atao ela kokoa, raha toa ka manam-potoana be eo anilanao ianao dia mety ho tsara kokoa ny mampiasa bisikileta handoro kaloria bebe kokoa, fa amiko manokana dia ny mihazakazaka no fomba mora indrindra izaho manary lanja, ampahany satria manakana ny fahazotoan-komana, ampahany satria rehefa mahazo zavatra toy izao aho dia misotro kafe sy mofomamy somary somary kely, izay izao dia tsy ratsy mihitsy raha manana iray amin'ireo Fanatanjahantena ireo ianao ary mety ho mora zahana ianao manandrana mamoy lanja kely, azafady mba ampahafantaro anay ary apetraho amin'ny fanehoan-kevitra mba tianay ny maheno izany. Manantena aho fa nankafizinao ny lahatsoratray, noho izany azafady manome ny ankihiben-tànanao tsy te-hahita izao tontolo izao eraky ny efijery ary tadiavo ireo lahatsoratra hafa nataonay ary raha te hahita lahatsoratra iray nataonay momba ny famoizana kaloria ianao, an'arivony amin'izy ireo no atahoranay eto. ary raha te hahita fampitahana eo amin'ny filomanosana sy ny fihazakazahana ianao raha resaka fihinanana kaloria dia azonao jerena eto ambany
Afaka manolo ny hazakazaka ve ny bisikileta?
Na dia elanelan'ny bisikileta azaafakamandray anjara betsaka amin'nymihazakazakaFitness, tsy misyafaka manolony mampiavaka nymihazakazakafampiofanana. Amin'ny fanampianamitaingina bisikiletaao amin'nymihazakazakaregimen, afaka manamboatra fitness ianao raha tsy manimba ny tongotrao.8 Aogositra 2014
Eny,bisikiletaafaka manampyvery tavy kibo, fa mila fotoana. Ny fanadihadiana vao haingana dia nampiseho tsy tapakabisikiletamety hanatsara ny ankapobenymatavyvery ary mampiroborobo lanja mahasalama. nyhampihenaankapobenykibofanatanjahan-tena aerôbika somary mahery, toy nybisikileta(na anatiny na ivelany), dia mahomby hampidina azytavy kibo.2 feb 2021
Raha ny hahavery lanja anao no tanjonao, dia fomba mahomby hanaovana izany ny bisikileta. Ary vaovao tsara iray hafa koa, raha ny bisikileta no hany tanjonao, ny fihenan'ny lanja mandritra ny fihazonana ny fahombiazana dia hahatonga anao ho haingana kokoa. Eny, noho izany, ohatra, ny mpitaingina 75-kilao mitaingina havoana lava iray dia ho tonga eo an-tampony iray minitra haingana raha toa ka very 2 pounds fotsiny izy - eny, ary mba hakana mafy an'io ohatra io dia goavana tokoa ny fahasamihafana.
Ka ny mpitaingina 90 kilao dia hamonjy efa ho dimy minitra sy sasany raha mahavita mandany 10 pounds amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany izy ireo, avy eo no fomba tsara indrindra hampihenana lanja? Ireto misy torohevitra dimy haingana sy mora hanampiana anao amin'izany.- Taona maro lasa izay dia nolazaina tamintsika rehetra fa ny fomba tsara indrindra hampihenana lanja be loatra dia ny fandaniana fotoana be dia be amin'ilay antsoina hoe faritra mandoro tavy. Ny teôria dia hoe amin'ny haavo ambany dia handoro tavy isan-jato avo kokoa raha oharina amin'ny gliosida - ary tsara izany raha toa ianao ka nanao fanatanjahan-tena tontolo andro, fa ny tena marina dia tsy manana an'io rendrarendra io ny ankamaroantsika.
Ka raha manandrana manao fanatanjahan-tena mandritra ny fotoana feno ianao dia ny hamafin'ny saina no izy - eny, handoro kaloria betsaka kokoa isan'ora amin'ny dia mafy sy mafy tokoa ianao fa tsy amin'ny fifaliana lava ao anaty lasely. Amin'ny faran'ny andro, ny fihenan'ny lanja dia ny fandoroana kaloria betsaka kokoa noho ny laninao. Fanampin'izay, manana tombony fanampiny ianao amin'ny ankapobeny tsy dia hanoanana aorian'ny familiana mafy noho ny rehefa mandeha fiara lava sy miadana, noho izany dia tsy dia mihinana loatra ianao raha vao miditra eo am-baravarana. - Eto amin'ny GCN dia misy fotoana fohy sy mafonja azonao atao ao anaty trano.
Raha mampiditra roa na telo amin'izy ireo amin'ny fampihetseham-ponao isan-kerinandro ianao dia azo antoka fa eo amin'ny lala-mahitsy ianao. ♪ ♪ - Ny rano fisotro dia tena tsara ho anao, ary tsy izany ihany fa mety hanakana kely ny fahazotoan-komana koa. Ankehitriny, rehefa nisotro zava-pisotro tsara ianao dia tsy hahatsapa ho noana intsony.
Ity ary misy tetika kely tsara ho anao. Rehefa mandeha amin'ny dianao ianao dia manaova rano iray vera tena lehibe, angamba pint iray na maromaro, alohan'ny hisakafoanana. Izy io dia hampitony ny vavoninao, ka tsy ho noana be ianao rehefa misakafo ka tsy dia mihinana loatra.
Ary azonao atao ity fikafika ity alohan'ny sakafo lehibe amin'ny antoandro koa. Sakafo maraina, atoandro ary sakafo hariva ary na dia alohan'ny sakafo maraina sy atoandro aza. Andro mahafinaritra, mihobia. ♪ - Soso-kevitra laharana fahatelo.
Mihinana kely sy matetika rehefa mitondra fiara mihoatra ny 90 minitra. Mety ho toa mifanohitra amin'ny intuitive izao ny mihinana betsaka kokoa noho ny mahazatra anao, indrindra rehefa manandrana mampihena ny lanjanao, fa zakao vetivety fotsiny aminay izy dia hanazava izahay.- Eny, jereo raha manandrana mamoy lanja eo dia fironana hametra ny vola laninao mandritra ny fanatanjahan-tena, saingy araka ny voalaza tetsy aloha, dia mety hiteraka olana be loatra amin'ny sakafo rehefa tonga any an-trano.
Ka raha mihinana kely sy matetika ianao mandritra ny dianao, dia mety ho hitanao fa tsy dia noana loatra ianao rehefa mandeha eo am-baravarana ka tsy dia misakafo. Manana zavatra sisa ve ianao? - Tsia, lasa daholo. - Aargh. ♪ ♪ - Marina, ny manaraka dia misy ifandraisany amin'ny teboka voalohany, ary izany dia ny hamafiny.
Ka na dia tsy voatery mikasa ny fizarana elanelam-potoana feno aza ianao dia afaka manao soa be dia be ho anao amin'ny alàlan'ny fandatsahana elanelam-potoana avo lenta aorian'ny faran'ny dia ataonao - marina izany. Nasehon'ny fanadihadiana fa ny fihinanana oksizenina aorian'ny fampiofanana dia afaka manampy amin'ny fandoroana tavy tokoa. Ny fomba tsara indrindra hidirana amin'ity fanjakana ity dia ny fanaovana ezaka mafy any amin'ny faran'ny fandehanana, ary amin'izany dia mbola handoro kaloria an-taonina ny vatanao na dia mipetraka eo ambonin'ny sofa aza ianao.
Akory ny hatsarany - Ie, io no tsara indrindra mandrakizay. - Ny tendronay farany dia ny mametraka tanjona ary soratana miaraka amin'ny tabilao mavesatra. Ankehitriny, alao antoka fa hitazomana ny tanjonao satria tsy misy ratsy kokoa noho ny mametraka tanjona tsy tratrarina.
Ary avy eo soraty izy ireo ary tazomy amin'ny toerana mety hahitanao azy ireo, toy ny eo am-baravaran'ny vata fampangatsiahana, ary amin'izany dia azo inoana fa hifikitra amin'ny drafitrao ianao. - Eny, ary sahala amin'ny nolazain'i Matt, tokony hojerenao matetika koa ny lanjanao. Betsaka ny olona any izay manolo-kevitra ny tsy handanjalanja ny tenanao isan'andro, fa tsy heveriko ho zavatra ratsy izany raha mbola manao izany amin'ny fotoana mitovy isan'andro ianao.
Mazava ho azy fa hisy andro izay hitombo kely io isa io, fa raha mitahiry karazana tabilao amin'ny lanjanao ianao dia tokony, rehefa mandeha ny fotoana, ao anatin'ny volana vitsivitsy, jereo fa ny fironana ankapobeny amin'ny tsipika dia mankany amin'ny tanjonao farany. . ♪ ♪ - Ary izao dia toro-hevitra momba izay tsy tokony hatao. Izany dia zavatra mety natoron'ny maro amintsika na nahita olon-kafa nanao izany nandritra ny taona maro, fa ny ankamaroany tany Frantsa.
Na izany aza, rano daholo izany. Tsy dia atahorana hampidi-doza fotsiny izany, fa rehefa voadona tsara ianao dia hiverina indray ny lanja rehetra - aza atao izany. ♪ ♪ - Ka azonao izany.
Mba hampihenana ny lanja dia tokony manomana dia be dia be ianao, misotro rano amin'ny fomba stratejika, misakafo tsy tapaka amin'ny dia lavitra kokoa, mametraka elanelam-potoana vitsivitsy amin'ny faran'ny dianao mahazatra, mametraha tanjona ary soraty. Ary farany, aza be loatra ny tenanao manandrana mampihena. Tena tsotra, tena - eny, tena tsotra.
Izahay dia nilaza ny lahatsoratra momba ny fiofanana an-trano tany aloha. Ka raha tsindrio eo ianao dia hoentina mankany amin'ny toerana misy anay misy fiofanana mahery vaika. Na eo ambany fotsiny, izaho sy i Matt dia nanao lahatsoratra momba ny lanjan'ny bisikileta ary misy fiantraikany amin'ny fahaizanao miakatra izany.
Ka misy fambara tsara eto - Ary raha hisoratra anarana amin'ny GCN, ahoana ny momba anao amin'ny tsindrio an'io fomba fijery mahafinaritra io? - Oh, ary aza adino ny 'mankafy' ny lahatsoratray, na ity manokana manokana. Ary ny hafa koa.- Amin'ny lafiny manokana.- Eny.
hitaingina bisikiletaho an'ny fihenan-danja: Paikady mahomby 4 hanandrana.Bisikiletamitaingina dia fampihetseham-po kardio tena tsara. izanyafaka manampytosikanyfahasalaman'ny fo sy havokavoka, manatsaranymikoriana ny rà, manangana tanjaka hozatra ary midinanyhaavon'ny adin-tsaina. Ambonin'izany, izyafakaihany koamanampy anaomandoro tavy, kaloria fanilo, arymampihena lanja.17 Jul. Feb 2020
HanaoManome anao anao ny bisikileta?Bisikiletatsy hanaomanome anaovatolampy-mafyFaritrafa tsy midika izanynycore tsy handray soa.Bisikiletatsy manome fivezivezena ampy hiasa tsara ny kibo rehefaianareomitaingina fa toy nyBisikiletaNomarihin'i Radar, 'satria nitombo ny hamafin'ny dianony asan'nyFaritra'.
Tsara ve ny bisikileta 10 kilaometatra ao anatin'ny 30 minitra?
nytsarasalanisa ho an'ny abisikileta folo kilaometatramitaingina dia eo anelanelan'ny 45minitraary adiny iray. Raha vao manomboka ianao dia azo inoana fa hanakaiky kokoa ny marika ora. Ohatra, raha mikendry ianaotsingerina 10 kilaometatra ao anatin'ny 30 minitra, mila haingam-pandeha 20 mph (32.19 kph) ianao.
Mety amin'ny bisikileta ve ny mihazakazaka?
Fampitomboana ny fihenan-tsasatry ny aretim-po, ny hozatra ary ny fandeferana amin'ny fanatanjahan-tena. Ankoatra ny hakitroky ny taolana,mihazakazakasatria ny fampiofanana amin'ny cross-training dia afaka manome traikefa aerobika hafa tanteraka ho an'ny ahazakazaka am-bisikileta, mitarika fahaiza-mitombo sy fiaretana hozatra.
nytsingerina isan'andromitaingina ny20 minitradia ampy hijanonanaara-pahasalamana. tapakabisikiletamanampy amin'ny fandoroana kaloria manodidina ny 1.000 isan-kerinandro, ary koabisikiletaamin'ny hafainganam-pandeha 12 mph dia hanampy anao handoro kaloria 563 isan'ora, hoy ny fikarohana. Ny tsy fahampian'ny fampihetseham-batana dia iray amin'ireo antony mampidi-doza indrindra amin'ny fahafatesana manerantany.12 Aogositra 2017
fampiharana fitondra bisikilety fitbit
Mandra-pahoviana aho no tokony bisikileta hanao fampihetseham-batana tsara?
Mikasa ny handeha amin'nybisikiletaary mitaingina mandritra ny 30-60 minitra, 3-5 andro isan-kerinandro. Atombohy amin'ny hafana ny hafanana rehetra. Mametaka amina tongotra miadana sy miadana mandritra ny 5-10 minitra. Ampitomboy ny hafainganam-pandehanao dia manomboka hatsembohana ianao.26 nov Feb 2020
Iza no tsara kokoa aminao mihazakazaka na mandeha bisikileta?
1. Fahasalamana aretin-kozatra Mikasika ny fahasalaman'ny kardia (cardio), dia samy mitondra soa avokoa na ny mihazakazaka na amin'ny bisikileta. Ny hetsika aerobika dia manampy amin'ny fanamafisana ny fonao mba hahafahany mibaiko oksizenina bebe kokoa amin'ny vatanao. Ny fanaovana fanatanjahan-tena amin'ny kardio, toy ny mihazakazaka sy bisikileta, dia mampianatra ny fonao hipaoka bebe kokoa amin'ny fotoana sisa rehetra.
Inona no maha samy hafa ny fihazakazahana sy ny bisikileta?
Sarotra ny manao fampitahana marina, saingy namolavola raikipohy ankapobeny aho izay tena akaiky. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fihazakazahana sy bisikileta dia ny angovo laninao mandritra ny hazakazaka dia miakatra arakaraka ny hafainganam-pandehanao. Amin'ny bisikileta, miakatra be dia be izy io.
Maninona ny hazakazaka no mandoro kaloria betsaka kokoa noho ny mitaingina bisikileta?
Ny fihazakazahana marina dia mandoro kaloria bebe kokoa isaky ny iray kilaometatra, fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy afaka mihazakazaka kilometatra maro araka izay azony atao, indrindra raha somary tsy misy endrika ianao. Manome tsiny ny hery misintona. Rehefa mihazakazaka ianao dia mila manainga ny lanjan'ny vatanao ambonin'ny tany handroso ny tenanao.